UNTH;ARỤ NA MPỤ AKARỊA – hoo!haa!!
Enugwu: N’agbanyeghị na enweela onye nlekọta ụlọ ọgwụ ọhụrụ n’ụlọ ọgwụ UNTH, Ituku-Ọzara, arụ na mpụ ka na-arị ibe ya elu n’ebe ahụ.
Nke na-akpọtụ ugbua bụ chandum e gwụrụ ọtụtụ ndị dibịa oyibo nnọtu (resident doctors) tinyere akwụkwọ anamachọ ọrụ n’ụlọ ọgwụ ahụ.
Ọtụtụ n’ime ha bụ ndị kwụrụ ego sitere na Narị Puku Naira iri abụọ n’ise ruo Narị Puku Naịra iri atọ iji nweta akwụkwọ ewemn’ọrụ (appointment letter) achọpụtawo “na-eriela ha”
Ụfọdụ ndị ọnyà a matara na-ekwu na ha arụruwo ọrụ ebe ahụ ihe ruru izu ụka atọ tupu ha achọpụta ya bụ mpụ.
Nnyocha hoo!haa!! mere gosiri na onye a na-atụ aka maka ya bụ mpụ bụ ọchịchị nọbu n’ụlọ ọgwụ ahụ mgbe Dọkịnta Kristova Ama jibu ọkwa dịka Onye Nlekọta ụlọ ọgwụ (CMD) ahụ.
Otu onye nkea metụtara kọwara sị, “Ka anyị chọpụtara ihe na-aga, anyị bịara UNTH ma ha sịrị anyị na aha anyị so n’aha nke a ka ga-ewepụta. Mana akụkọ a enweghị isi maka ọtụtụ ndị aha ha pụta woro bucha ndị anyị bu ụzọ”
Ndị dọkịnta na-arụ ebe ahụ ka e jiri “hazie ya bụ ọrụ” nke yiri ezi okwu ebe ndị aka dị na ya gụnyere ndị nwere agba na ya bụ ụlọ ọgwụ. Iji maa atụ akwụkwọ ewemnọrụ ha bụ otu nwanyị bụ Ọrịakụ Uju Ugwunwa tinyere aka na ya n’aha onye Director na-ahụ maka ọchịchị (Director of Administration).
N’okwu ya, onye bụzi Onye Nlekọta ụlọ ọgwụ ahụ bụ Dọkịnta Obinna Ọnọdugo kọwara na ọchịchị pụrụ apụ were ndị dibịa oyibo nnọtu karịa ole ụlọ ọgwụ ahụ ga ebunwu.
Kaosiladi, Dọkịnta Ọnọdugo kọwara na ya amaghị banyere ịna ego aka azụ ọbụla maka inye ọrụ.
Ka ọ dị taa, a na-atụ anya ịhụ etu ọchịchị nọ ugbua n’ụlọ ọgwụ ahụ ga-esi “kwọọ onye ukwu wara” iji dozie ihe ndị ghasara aghasa na ya bụ ụlọ ọgwụ.
Cheta kwa na n’ọnwa Disemba afọ gara aga, otu ndị dibịa oyibo nnọtu (Association of Resident Doctors) nke ụlọ ọgwụ mere njem ngagharị iwe were gaa n’ụlọ ọrụ na-achụ mpụ ọsọ bụ EFCC ịrịọ ka ha nyochaa Osote Onye Nlekọta ego (Deputy Director of Finance) nke ụlọ ọgwụ ahụ bụ Mazị Chukwudị Ọnụchukwu.
Onyeisi ndị dọkịnta ahụ bụ Dọkịnta Aịzaya Nwidenyi kwuru na ihe amaghịkwa kwụrụ na UNTH n’ihi etu ndị nọ n’isi oge ahụ ji eripịa ego e kwesịrị iji arụ ọrụ ebe ahụ.
Ndị ọ kpọrọ aha maka iri ego karịrị nde pụrụ nde Naira ebe ahụ bụ Onye Nlekọta ụlọ ọgwụ ahụ ya na Osote Onye Nlekọta Ego nke ụlọ ọgwụ ahụ.
N’agbanyeghị na UNTH bụ ụlọ ọgwụ ọzụzụ ndị dọkịnta n’okpuru Gọọmenti Etiti, e nweghị ihe na-aga aga n’ebe ahụ. Igwe ọkụ (generator) adịghị mma, mmiri adịghị ebe ahụ, e nweghịkwa ụlọ mposi na-arụ ọrụ, ọtụtụ akara gwa eji enyocha ndị ọrịa ahụ emebichaala.
hoo!haa!! na-arịọzị ndị ụlọ nzukọ omebeiwu Enugwu Steeti nakwa ndị nke ala anyị ka ha lebaa anya na mpụ nakwa arụrụ ala nile ma ndị gara aga ma ndị ka na-agakwa n’ihu ugbua (ma ọ bụrụ na-e nwere) na UNTH ghara ịsị ka “ihe nile tara n’abalị bụrụ anwụ nta” iji hụ na ọzọ agaghịkwa eme.
Previous Post: ARỤ! MMỌNWU NA-AṄỤ HERO!
Next Post: NENWE AKWANYERELA DIG NWOBODO UGWU